Georgia dị egwu maka ndị ọbịa LGBTQ mpako: UNWTO SG si Georgia enweghị okwu ọ bụla
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » LGBTQ » Georgia dị egwu maka ndị ọbịa LGBTQ mpako: UNWTO SG si Georgia enweghị okwu ọ bụla
Na -agbasa Akụkọ Europe • Akụkọ na -agbasa na Georgia • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • LGBTQ • News • ndị mmadụ • Tourism • Ego njem | Atụmatụ njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
LGBT Mpako Georgia
Njem nleta pụtara udo, nghọta zuru ụwa ọnụ na ịchọgharị ọdịbendị ndị ọzọ. Ọ pụtakwara nha anya na nnagide. The Republic of Georgia egosiputa obere nghọta mgbe otu onye igwefoto merụrụ ahụ nke ukwuu na ịkọ maka ịkagbu aha Nwoke nwere Nwaanyị n'ihi ime ihe ike.
Mpako abughi nani mmeghari uwa nile nke ndi LGBT na-achikota ma gosiputa ọkọlọtọ, oriri na nkwari, ikwu okwu, ma nwee anuri, o bukwa nnukwu njem ihe nlere n'ọtụtụ mba n'uwa.
Na Republic of Georgia, ọtụtụ narị gbakọtara na isi obodo, Tbilisi, na Sọnde mgbe ọnwụ nke Alexander Lashkarava, otu n'ime ọtụtụ ndị odeakụkọ wakporo ka ndị otu na-eme ihe ike wakporo ụlọ ọrụ mgbasa ozi LBGT +, na-eme ka ndị na-eme mkpọtụ kwụsị Ememe Nganga na mba a.
Onye na ahụ maka World Tourism Organisation, Secretary General UNWTO Zurab Pololikashvili achọghị ikwu maka nsogbu a na Georgia. Zurab si Georgia.
IGLTA bụ onye otu mmekọ UNWTO, World Tourism Organisation.
UNWTO nwere odeakwụkwọ ukwu si Republic of Georgia nke na-achọghị ikwu okwu banyere ọnọdụ ọgba aghara dị na mba ya mgbe ebusochara ndị otu LGBTQ agha, na-amanye ịkagbu Nwaanyị, njem na njem nlegharị anya n'ọtụtụ mba.
Scuffles dara na nzuko omeiwu nke Georgia na Mọnde ka ndị nta akụkọ na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emegide ọchịchị gbalịrị ịbanye n'ụlọ omebe iwu mkpesa banyere ọnwụ nke onye igwefoto a kụrụ aka mgbe ọ na-eme ihe ike megide ndị ọrụ LGBT n'izu gara aga.
Ọtụtụ narị gbakọtara na isi obodo Tbilisi na Sọnde mgbe ọnwụ nke Alexander Lashkarava, otu n'ime ọtụtụ ndị nta akụkọ merụrụ ahụ nke ukwuu ka ndị otu na-eme ihe ike wakporo ụlọ ọrụ mgbasa ozi LBGT +, na-eme ka ndị na-agba mbọ kwụsị nganga ha.
Ngalaba US State na Tuesday kpọrọ oku ka udo dịrị na mba Georgia mgbe ọnwụ onye igwefoto kụrụ n'oge ime ihe ike megide ndị ọrụ LGBT ma kwuo na a ga-ekpe ndị busoro ndị ngagharị iwe udo na ndị nta akụkọ ikpe.
Onye na-ekwuchitere Ngalaba na-ahụ maka Ngalaba Ned Price gwara obere akụkọ na Washington na-agbaso ọnọdụ dị na Georgia ma kpebisie ike ịhụ na a ga-aza ndị ọrụ ahụ ajụjụ.
“Nchebe nke onye nta akụkọ ọ bụla nke Georgia, na ntụkwasị obi nke ọchịchị onye kwuo uche ya na Georgia, n’ezie, chọrọ ka onye ọ bụla wakporo ndị ngagharị iwe udo, na ndị nta akụkọ na July 5 na 6, ma ọ bụ ndị kpaliri ime ihe ike, a ga-amata ha, ha kwesịrị ịbụ jidere ma kpoo ya ikpe ruo oke nke iwu, ”ka Price kwuru.
“Anyị na-echetara ndị isi Georgia na ndị mmanye iwu banyere ibu ọrụ ha ichebe ndị niile na-egosipụta ikike iwu obodo ha. Anyị na-echetara ha ọrụ dịịrị ha ichekwa ndị nta akụkọ na-egosipụta nnwere onwe nke nta akụkọ. ”